AirTies Air 4920 Smart Mesh အသုံးပြုသူလက်စွဲ - လက်စွဲစာအုပ် +
ပင်မစာမျက်နှာ » အဲလို » AirTies Air 4920 Smart Mesh အသုံးပြုသူလက်စွဲ
AirTies Air 4920 Smart Mesh အသုံးပြုသူလက်စွဲ
ဧပြီလ 26, 2018 ဧပြီလ 27, 20189မှတ်ချက် AirTies Air 4920 Smart Mesh အသုံးပြုသူလက်စွဲအပေါ်
1 AirTies Air 4920 Smart Mesh အသုံးပြုသူလက်စွဲ
1600 Mbps ရှိသော Smart Mesh Access Point Air 4920
လွယ်ကူသောတည်ဆောက်မှု - Access Point
၁။ သင်၏ router ဘေးတွင် Air 1 တစ်ခုကိုနေရာ ချ၍ ပူးတွဲပါ Ethernet ကို အသုံးပြု၍ ထိုနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပါ
cable ကို (အဝါရောင် plug ကို) ။
၂။ Air2device ကို main နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၃။3GHz နှင့်5GHz LEDs များသည်အစိမ်းရောင်ရှိသည့်တိုင်အောင်စောင့်ပါ ဒါက ၃ မိနစ်အထိကြာနိုင်တယ်။
4. အခုဆိုရင်သင်မိုဘိုင်းကိရိယာများကိုသင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အသစ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီ။ ပုံမှန်ကွန်ယက်အမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုစက်၏အောက်ခြေတွင်တံဆိပ်တပ်ထားသည်။
- သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီ (ဥပမာ - လက်တော့၊ ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet)၊
၅။ (Optional) သင်၏ network name (SSID) နှင့် password ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်ပါ၊ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍“ http: //air4920.local” ကိုရိုက်ထည့်ပါ
လိပ်စာတန်း။ ဘယ်ဘက်အကွက်မှဝင်ရောက်ပြီးလျင်မြန်စွာချိန်ညှိခြင်းသို့သွားပါ။ (ပုံမှန် login စကားဝှက်သည်အလွတ်ဖြစ်သည်။ )
သင့်ရဲ့ WiFi လွှမ်းခြုံ (MESH) ဖြုန်း:
အဘိတ်: Air ကိုအသစ် 4920 ချိတ်ဆက်
၁။ router တည်ရှိသည့်အခန်း၌ Air 1 အသစ်ကို ၃ ခုခန့်အကွာတွင်ထားပါ
ရှိပြီးသား Air 4920 device မှမီတာ၊ main ကိုချိတ်ဆက်ပါ။5GHz နှင့် 2.4 GHz LEDs နှစ်ခုစလုံးသည်အစိမ်းရောင် (4 စက္ကန့် ON၊ ၄ စက္ကန့် OFF) မီးလင်းလာသည်အထိစောင့်ပါ။ ဒီဟာက ၃ မိနစ်အထိကြာနိုင်တယ်။
2. 2.a WPS ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ လက်ရှိ Air 4920 (router ဘေးတွင်) ကို2စက္ကန့်နှင့်
ထို့နောက် 4920 စက္ကန့် (2.b) အတွက်အသစ်က Air2အပေါ်။
5 GHz နှင့် 2.4 GHz LEDs Flash စတင်ပြီး device များအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ငါးမိနစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ တစ်ချိန်ကဆက်သွယ်မှုကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် LEDs များသည်အစိမ်းရောင်ပေါ်လာသည် (5 GHz LED သည် ၅ စက္ကန့်တိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်ခေတ္တပိတ်လိမ့်မည်) ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင့်ကိရိယာအသစ်ကိုအောင်မြင်စွာပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ သင်၏လက်ရှိ Air 4920 ကွန်ယက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုသင်၏ Air 4920 အသစ်နှင့်အလိုအလျောက် configure လုပ်သည်။
မှတ်စု: အကယ်၍ ပစ္စည်းသစ်ပေါ်ရှိ 5GHz LED သည်ငါးမိနစ်အတွင်းအစိမ်းရောင်မလင်းပါက၊
ကျေးဇူးပြု၍ အဆင့်2ကိုပြန်လုပ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်သောအခန်းတွင် Air 4920 ကိုချိန်ညှိခြင်း
3. Air 4920 အသစ်ကိုယခုသင်အလိုရှိသည့်အခန်းထဲတွင်ဖြုတ်ပြီးတပ်ထားနိုင်သည်။
မွတ္စု: အကယ်၍5GHz LED သည်အစိမ်းရောင်မလင်းပါက (5 GHz LED သည်တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်ခေတ္တပိတ်လိမ့်မည်
၃ မိနစ်အတွင်း ကျေးဇူးပြု၍“ ပြ)နာဖြေရှင်းခြင်း” (စာမျက်နှာ ၅) တွင်ဆွေးနွေးပါ။
4. (Optional) ယခုတွင်သင်သည် ethernet cable (အဝါရောင် plug) ကို အသုံးပြု၍ wired devices (ဤဥပမာတွင် Set-Top Box) ကို Air 4920 သို့ Air XNUMX သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
5. (Optional) သင့်အနေဖြင့် Air 4920s အပို ၁ ခုမှအဆင့်များကို ထပ်မံ၍ သင်ကွန်ယက်သို့ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အခြားအခန်းတစ်ခုတွင်ကြိုးမဲ့လွှမ်းခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်လိုပါကအပို Air 4920 ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ Ethernet မှတစ်ဆင့်ဤ Air 4920 (ဥပမာ STB, ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဂိမ်းစက်တစ်ခု) နှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
သင်ဖုံးလွှမ်းလိုသောတည်နေရာသည်သင်၏လက်ရှိ Air 4920 နှင့်အလွန်ဝေးလံပါကသင်အပိုဆောင်း Air 4920s ကိုထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိရန်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
- သင်၏ modem တွင်ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပိတ်ထားပါ။
- လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏အလားအလာရှိသောသတင်းရင်းမြစ်။ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများတွင်မျက်နှာကျက်ပန်ကာများ၊ အိမ်လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များ၊ ပီစီများနှင့်ကြိုးမဲ့ဖုန်းများ (ဟန်းဆက်နှင့်အခြေစိုက်စခန်း) တို့ပါဝင်သည်။
- ကြီးမားသောသတ္တုမျက်နှာပြင်များနှင့်အရာဝတ္ထုများ။ ကြီးမားသောအရာဝတ္ထုများ၊ ဖန်များ၊ လျှပ်ကာနံရံများ၊ ငါးကန်များ၊ မှန်များ၊ အုတ်များနှင့်ကွန်ကရစ်နံရံများကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင်များသည်လည်းကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုအားနည်းသွားနိုင်သည်။
- Air 4920s နှင့်အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (VDSL modems, router / gateways, set-top boxes, TVs) စသည်တို့ကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုရန်မပြတ်မတောက် power supply (UPSes) (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး surge protectors) ကိုအသုံးပြုရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကနေ။ လျှပ်စစ်မုန်တိုင်းများ၊ ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ပါဝါဇယားကွက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအန္တရာယ်များသည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုသိသိသာသာပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထပ်မံ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်စက္ကန့်ပြတ်တောက်လျှင်ပင် modem များ၊ ကြိုးမဲ့ဖောက်သည်များ၊ တီဗီများ၊ set-top box များစသည်တို့အားပါဝါပိတ်ထားခြင်း (သို့) ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများအလိုအလျောက်ဖွင့်လာလျှင်ပင်၊ အားလုံးသောအွန်လိုင်းများပြန်လာပြီးသင်၏အင်တာနက်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကိုခံစားခွင့်မပေးမီမိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
ယူနစ်ကိုစက်ရုံပြင်ဆင်မှုသို့ပြန်ပို့ရန် (စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း) ပြန်လည်စတင်ရန်ခလုတ်ကို (စက္ကန့်ပိုင်းအနည်းငယ်တွင်) နှိပ်ထားပါ။ သတ္တုစက္ကူကလစ် (ရှည်လျားသောအစွန်အဖျားရှိ) သို့မဟုတ်ခိုင်ခံ့သောသွားသွားကလေးအားဤလုပ်ငန်းအတွက်ပုံမှန်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။ ပြန်လည်စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစပျိုးသောအခါအရှေ့ဘက်ရှိ LED များသည်ခဏတဖြုတ်“ တောက်ပ” လိမ့်မည်။ ယူနစ် (၃ မိနစ်ခန့်ခန့်) မှစက်ရုံချိန်ညှိချက်များသို့ပြန်သွားပါလိမ့်မည်။
- အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ပါ -
သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်စကားဝှက်: ……………………………………………… ..
ဒီထုတ်ကုန်သည် open source community မှတီထွင်ထားသော software ကိုအသုံးပြုသည်။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောဆော့ (ဖ်) ဝဲမျိုးကိုမဆိုထိုဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သီးခြားလိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ (လိုင်စင်ရရှိသည်) (GPL, LGPL စသည်) ။ သက်ဆိုင်သောလိုင်စင်နှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုစက်၏အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောလိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသင်နှင့်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သဘောတူကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဝေါဟာရများကသင့်အား software ၏ source code ကိုခွင့်ပြုပါက AirTies ၏တောင်းဆိုချက်အရထို source code ကိုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်မိတ္တူတစ်ခုရရှိရန်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်စာရေးပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သို့မဟုတ် Snail mail မှတဆင့် - AirTies ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး Gulbahar Mah သို့ဆက်သွယ်ပါ။ Avni Dilligil Sok ။ No:5Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Turkey AirTies မှသင်တောင်းခံထားသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်ပါသောဒေါ်လာ ၉,၉၉ ဒေါ်လာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များပါသောစီဒီတစ်ဆင့်သင်ထံသို့သင့်ထံသို့စာပို့မည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Micro Air ကိုတုန်ခါကွက် Nebulizer NE-U22V အသုံးပြုသူလက်စွဲ Micro Air Vibrating Mesh Nebulizer NE-U22V အသုံးပြုသူလက်စွဲ - အကောင်းဆုံး ...
Kalarstein Wonderwall Air Art စမတ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ Kalarstein Wonderwall Air Art စမတ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ - Optimized PDF ...
Smart Dial & Air Fry [NE63T8711SS] အသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့်အတူ Samsung Front Control လျှော -၁ လျှပ်စစ်အင်ဂျင် NE63T8711SS Samsung Front Dial နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသောလျှပ်စစ်ဒိုင်းခ ...
Smart Dial & Air Fry NX60T8711SS မီးဖိုသုံးအသုံးပြုသူလက်စွဲပါသော Samsung Front Control တွင်ပါ ၀ င်သောဓာတ်ငွေ့အကွာအဝေး စမတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် ... Samsung Front Control Slide-in Gas Range
Smart Dial & Air Fry NX60T8711SS မီးဖိုသုံးအသုံးပြုသူလက်စွဲပါသော Samsung Front Control တွင်ပါ ၀ င်သောဓာတ်ငွေ့အကွာအဝေး NX60T8711SS Samsung Dial နှင့်အတူရှေ့မျက်နှာစာထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောဓာတ်ငွေ့အကွာအဝေး ...
Breville LAP300 Smart Air Purifier ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ the Smart AirTM သန့်စင်စက်ညွှန်ကြားချက်စာအုပ် - LAP300 BREVILLE အကြံပြုသည် ...
ဧပြီလ 26, 2018 ဧပြီလ 27, 2018 Posted in,အဲလိုTags: air ကို 4920, အဲလို, အသုံးပြုသူကို manual
air4920.local [Router ဝင်ရန်]
နိုဝင်ဘာလ 16, 2018 မှာ 12: 51 နံနက်
Extender သို့ ၀ င်ရန်စကားဝှက်ကိုမရနိုင်ပါ။ လက်စွဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစကားဝှက်သည်စောင်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစား။ ကျွန်ုပ်ရယူသုံးစွဲခွင့်မရခဲ့ပါ၊ ကွဲပြားသောပုံမှန်စကားဝှက်ကိုရှာဖွေ။ ကျွန်ုပ်တွင်ရှာမရပါ အဆိုပါသို့မဟုတ် extender သူ့ဟာသူထဲမှာအထုပ်။
ဧပြီလ 15, 2020 မှာ 6: 54 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏အနားယူမည့်ခလုတ်သည်ပြိုကွဲသွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ခလုတ်မပါဘဲမည်သို့ရပ်နိုင်သနည်း ……
မေလ 20, 2021 မှာ 3: 18 နံနက်
WPS ခလုတ်ကို ၁၀ စက္ကန့်ဆက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းပြန်လည်စတင်နိုင်သည်
Mary Buckman ပါ says:
ဇွန်လ 25, 2020 မှာ 7: 54 နံနက်
ငါဒီဟာတွေကိုဘယ်တော့မှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး သူတို့မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါသူတို့ကကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆင်းလာတဲ့အခါအကူအညီတောင်းဖို့ဘယ်သူမှမရှိတော့ငါရှာတွေ့တဲ့နံပါတ်တိုင်းကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အောက်တိုဘာလ 16, 2020 မှာ 6: 29 ညနေ
AirTies 4920 extender သည် AirTies 4921 extender နှင့် mesh ကွန်ယက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
Kelvin Miller က says:
နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 မှာ 4: 16 နံနက်
ငါ2airties ယူနစ်ရှိသည်။ လှေခါးထစ်များနှင့်အဓိကယူနစ်ကိုလှေကားထစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကျွန်တော့်မီးသေတ္တာဘေးမှာအပေါ်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမယ့်လှေကအောက်လှေကားတစ်ခုနဲ့သာချိတ်ဆက်မယ်။ နေရာအလိုက်ပစ္စည်းများစွာသည်လှေကားတစ်ချောင်းထက်အောက်ခြေလှေကားများနှင့်ချိတ်ဆက်နေပုံရသည်။ ဤပစ္စည်းများကိုပိတ်ထားသောယူနစ်သို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
အန်ဒီ Mulchek says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2020 မှာ 4: 02 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နားလည်မှုမှာ modem နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောယူနစ်သည်ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ပြီးအိမ်တစ်အိမ်လုံးတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပိုယူနစ်များသည်အချက်ပြမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးကန ဦး ယူနစ်မှတည်ထောင်ထားသောကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကန ဦး ယူနစ်မှတည်ထောင်ထားသောကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးထပ်ဆောင်းယူနစ်သည်သင့်အတွက်အချက်ပြမှုကိုတိုးစေသည်။
သြဂုတ်လ 24, 2021 မှာ 8: 05 ညနေ
AirTies Air 4920 အတွက် WPS pin ကဘာလဲ
စက်တင်ဘာလ 11, 2021 မှာ 5: 34 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည်ဤဘုတ်အဖွဲ့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဟုတ်ပါ။ ဒါကဒီနေ့ငါသင်ယူခဲ့တာ။ ငါ ၂ နှစ်လုံးလုံးငါ AirTies 4920 အလုံး (၂) လုံးကိုငါအထုပ်နှစ်ခုအဖြစ်အောင်မြင်စွာသုံးခဲ့တယ်။ မူလတပ်ဆင်မှုသည်လွယ်ကူသည်။
ဒီနေ့ငါတတိယ ၄၉၂၀ ယူနစ်ကိုထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်။ ငါမစခင်၊ မူလယူနစ်နှစ်ခုအလုပ်လုပ်တယ် (၅ စက္ကန့်တိုင်းမှာ 4920 GHz ခလုတ်နှိပ်သည်) ။ ငါ့လက်ပ်တော့မှာစက်ရုံထုတ် wifi နာမည်တစ်ခုရဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုငါတွေ့တယ်၊ အဲဒါကိုစက်ရုံထုတ်စကားဝှက်နဲ့သုံးပြီးအဲဒါကိုကြိုးမဲ့ချိတ်နိုင်တယ်။ ethernet ကေဘယ်သုံးပြီးဘယ်ယူနစ်နဲ့မဆိုငါဆက်သွယ်နိုင်တယ်။
ဤအချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်၎င်း၏ wifi network စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သောတတိယယူနစ်ကိုမြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်း၏ကွဲပြားသောစက်ရုံထုတ် wifi အမည်နှင့်စကားဝှက်ကို သုံး၍ ၎င်းကိုငါမချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါ။ BTW၊ တစ်ချိန်မှာ၊ ငါဓာတ်အားသုံးကြိုးအားလုံးကို Reset ကျင်းနားမှာစက္ကူကလစ်နဲ့သုံးပြီးသူတို့ရဲ့စက်ရုံဆက်တင်တွေကိုပြန်ညှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါဖြည်းညင်းစွာသုံးခဲ့တဲ့တတိယယူနစ်အတွက်သာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Ethernet cable မှတဆင့် router သို့ဆက်သွယ်ထားသော 4920 ယူနစ်သည် master ဖြစ်သည်။ တတိယယူနစ်ကိုထည့်ရန်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို master ယူနစ်မှ ၅ ပေခန့်တွင်မောင်းနှင်သည်။ တတိယယူနစ်တွင်အီသာနက်ကေဘယ်လ်မပါပါ။ master unit ပေါ်က WPS ခလုတ်ကို ၂ စက္ကန့်ကြာအောင်ငါနှိပ်ခဲ့တယ်။ ငါတတိယယူနစ် WPS ခလုတ်ကို ၂ စက္ကန့်ကြာအောင်ငါနှိပ်ခဲ့တယ်။ ငါ ၃-၅ မိနစ်စောင့်ပြီးယူနစ်နှစ်ခုလုံးရဲ့5GHz ခလုတ်က ၅ စက္ကန့်တိုင်းတုန်ခါလာတယ် (တတိယယူနစ်ကပိုကြာတယ်) ။ ထိုအချိန်တွင်သုံးယူနစ်ဖွင့်ထားသောကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် master unit ၏ wifi အမည် (router သို့ဝါယာကြိုးမှတဆင့်ဆက်သွယ်ထားသော) ကိုသာတွေ့လိုက်ရသည်။
ကျွန်ုပ်၏ router ၏ admin web page ကို သုံး၍ router သည်ယူနစ်သုံးခုစလုံး (တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသော IP address တစ်ခုစီ) ကိုမြင်နေသည်ကိုငါမြင်နိုင်သည်။ router admin page မှာပြထားတဲ့ MAC address ကိုသုံးပြီး master unit ရဲ့အောက်ခြေမှာ master unit ရဲ့ IP address ကိုငါဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ငါ့လက်ပ်တော့မှာ browser address အသစ်မှာအဲဒီ IP address ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်၊ အဲဒါက wifi နာမည်နဲ့ password ကိုပြောင်းခွင့်ပြုတယ်။ သင်ပြီးပါပြီ (အခြားယူနစ်နှစ်ခုတွင် wifi အမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်မကြိုးစားပါနှင့်) ။
အခုအလုပ်သုံးခုစလုံးနဲ့ငါကငါ့ရဲ့မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လျှောက်သွားနိုင်ပြီးသူတို့ကအင်အားအမြင့်ဆုံးအချက်ပြနဲ့ယူနစ်ကိုအလိုအလျောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ အလွန်အေးမြပြီးအသုံးဝင်သည်။ ငါဒါကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလုပ်ဖူးချင်တယ်။
router ရဲ့ wifi ကိုငါဖွင့်ထားခဲ့တယ်။ ငါ့အတွက်ငါကသူ့ဆီကအနှောင့်အယှက်ကိုမတွေ့ဘူး၊ ဒါကြောင့် router ရဲ့ wifi ကိုပြန်ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်ငါသူ့ကိုကျောဘက်မှာထားလိုက်တယ်။ BTW၊ ငါ့အခြေအနေမှာယူနစ်သုံးခုစလုံးမှ wifi အချက်ပြတာက router ထက်အများကြီးပိုအားသာတယ်၊ ကြိုးမဲ့အမြန်နှုန်းကအတက်၊ အဆင်းနှစ်ဆပိုမြန်တယ်။
GARMIN Force Trolling Motor Owner ၏လက်စွဲ
SUPREME SMILE လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံအသုံးပြုနည်းလက်စွဲ
SUNFORCE နေရောင်ခြည်သုံး Hanging Light လမ်းညွှန်လက်စွဲ
HOBO Water Logger Housing HOUSING-U2x အသုံးပြုသူလက်စွဲ
Smart Sensor Expander S-ADAPT-X5-10 အသုံးပြုသူလက်စွဲကိုစတင်ပါ
admin ရဲ့ on Beurer FT 65 သာမိုမီတာညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ
Carol on PHILIPS InnoSpire Essence Nebulizer Compressor အသုံးပြုသူလက်စွဲ
BOB SMITH on Masterbuilt 30″ ဒီဂျစ်တယ်လျှပ်စစ်ဆေးလိပ်သောက်အသုံးပြုသူလက်စွဲ
Cecil Gregory on Konga မှ FitPro နာရီလမ်းညွှန်ချက်များ - FitPro Tonic
Susan Engledow ဖြစ်သည် on ONN CD ကို Boombox ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ